Madaxweyne Farmaajo oo si Alshabaab loo soo afjaro sameeyey talaabo uu uga duwan yahay Madaxweynayaashii ka horreeyey!!! - SHABAKADDA WARBAAHINTA GEESGUUD | SHABAKADDA WARBAAHINTA GEESGUUD
Madaxweyne Farmaajo oo si Alshabaab loo soo afjaro sameeyey talaabo uu uga duwan yahay Madaxweynayaashii ka horreeyey!!!
Muqdisho (Caasimadda Online) – Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo markasta caddeeya Mowqifkiisa ku aadan sidii looga taqalusi lahaa Kooxda Shabaab ayaa ciddii lasocotay khudbaddii uu 10-kii Maarso 2018 ka jeediiyey Furitaanka Kalfadhiga 3-aad ee Baarlamaanka waxa uu dhowr jeer ku celiyey sida ay muhiimka u tahay in dowladdu ay ka guuleysato Argagixisada.
Maalin kadib Madaxweyne Farmaajo waxa uu qaaday talaabo muhiim u ah arrintaas oo ah in uu noqday Madaxweynihii ugu horreeyey ee Seexda Wasaaradda Wasaaradda Gaashaandhiga 27 kadib, isaga oo xiran Tuutaha Ciidanka arrintaas oo timid kadib markii uu shaaciyey in hawlmaalmeedkiisa uu u wareejiyey Wasaaradda Gaashaandhiga.
Waxaan rabaa in aan ku xasuusiyo wax aad ogtahay oo ku saabsan taariikhda aan wada aragnay ee Madaxweyne Farmaajo.
Madaxweynaha hadda talada haya waxaa ka mid ah taariikhda ay Shacabka Soomaaliyeed ku xasuustaan in isaga oo ra’iisul wasaare ka ah dalka uu hoggaan ka noqday in Alshabaab laga saaro Magaaladda Muqdisho, iyaga oo xilligaas heystay inta badan degmooyinka Gobolka Banaadir, marka aan tusaalahaas ku qalin qabsado dad badan oo aan ka mid ahay ayaa rumeysan in Madaxweyne Farmaajo uu ku guuleysan karo nabadeynta guud ahaan dalka.
Sawir noocee ah ayey bixineysaa in Madaxweynuhu uu ku hoydo Wasaaradda Gaashaandhiga?
Dadka dowladnimada jecel ee laga yaabo in ay qabeen aragti ah in Madaxda dalku aysan daacad ka ahayn dagaalka lagula jiro argagixisada waxa ay u tahay jawaab cad oo ay ku qanci karaa haddiiba Madaxweynihii dalku waqtigiisa iyo shaqadiisaba usoo wareejiyey meesha ugu sarreysa ee Ciidanka Xooga laga maamulo, dhinaca kale waxa ay muujineysaa in ay adag tahay in ay sii jiraan Alshabaab oo waxa ay u egtahay in dowladdu ay isticmaaleyso awoodeedii ugu dambeysay oo ay u taqaluseyso.
Madaxweyne Farmaajo in uu ku hoydo Wasaaradda Gaashaandhiga waxa uu dheer dadaal badan oo ku bixinayo dib u hagaajinta Ciidanka Xooga dalka iyada oo Dowladda dhexe arrintaas la kaashaneyso Dowlad Goboleedyada iyo Beesha Caalamka, marka la fiiriyo dadaaladaan oo dhan waxa ay muujinayaan in Soomaaliya ay gashay soo kabasho fiican oo dhinaca ammaanka ah.
Madaxweyne Farmaajo oo si Alshabaab loo soo afjaro sameeyey talaabo uu uga duwan yahay Madaxweynayaashii ka horreeyey oo ah in uu 27 sano kadib ku hoyday, hawlmaalmeedkiisana u wareejiyey Wasaaradda Gaashaandhigga.
The post Madaxweyne Farmaajo oo si Alshabaab loo soo afjaro sameeyey talaabo uu uga duwan yahay Madaxweynayaashii ka horreeyey!!! appeared first on Caasimada Online.